Honduras: ny fanohanana ny fizahantany anatiny · Global Voices teny Malagasy
Honduras: ny fanohanana ny fizahantany anatiny
Voadika ny 06 Jona 2018 4:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
(Marihina fa tamin'ny 17 Febroary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mino tanteraka ilay Honduras mpihira sady mpamoron-kira no bilaogera Guillermo Anderson fa afa-manavotra ny fireneny ny fizahantany anatiny. Nanoratra tao amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “There's This Little Hotel,” (Misy ity Hotely Kely Ity) izy, ao amin'ny bilaoginy izay naverina navoaka indray niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana hoe “mba ahafahana mamorona fizahantany amin'ity endrika ity dia tsy maintsy inoana ny maha-zava-dehibe sy ny hatsaran'ny firenentsika. Tsy maintsy inoana ny fiheverana fa afaka mandray tombontsoa amin'izany avokoa ny vondrom-piarahamonina rehetra. Tsy maintsy mino ary mahatoky fa manana mihoatra ny ampy amin'ny fahombiazana isika eto Honduras ary tsy ilaina ny mitady ravinahitra any ivelany ho an'ny hoavintsika”.
Saripikan'i Jose Luis Duron ary nampiasana lisansa Creative Commons.
Manana namana any amin'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny fireneny ihany koa i Anderson. Na izany aza, tsy miasa ho an'ireo sehatra lehibe izy ireo, fa miasa mafy kosa mba hananganana ny orinasany madinika. Mamaritra ny asan'izy ireo i Anderson eto:
Mamaly ny findainy sy mitantana ny bokiny manokana izy ireo, ary raha vao misy antso dia lasa izy ireo mitondra ny fiarany ary mametraka ny asany amin'ireo mpiara-miasa. Omeny tolotra manokana sy mahafinaritra ireo mpizaha tany. Miteny fiteny miisa telo izy ireo ary mahafantatra ny tantara sy ny kolontsaina eo an-toerana, ary indraindray aza izy ireo dia mahafantatra ny anarana sy ny toetra ananan'ny zavamaniry eny an-dalana. Babeny ny lakana, ny sambo lehibe misy kodiarana, ny fitaovana ho an'ny lakana sy ny fitaovana fianihana vatolampy, ny fitahirizana lagilasy misy ny voankazo ho an'ny mpizaha tany. Ary na dia eo aza izany rehetra izany dia mbola feno tsikitsiky ny tarehin'izy ireo ary tony tsara ho an'ireo mpizaha tany, izay talanjona amin'ny zavamaniry sy ny biby ary ny hatsaran-tarehy voajanahary manodidina .
Namaritra bebe kokoa momba ny asan'izy ireo amin'ny fananganana ny indostrian'ny fizahantany any Honduras izy:
Manana namana izay niasa mafy aho ary nahavita nanamboatra ny trano kely homarevaka na tanànakely ao amin'ny fireneko ho hotely sy trano fandraisam-bahiny tena mambabo fo indrindra eran'izao tontolo izao. Tahaka ireny mpanao majika ireny izy ireo, nalainy ny vato, ny zavamaniry sy tsora-kazo ary voninkazo ary nahavitany nanamboatra haingon-tanana tena zava-baovao tokoa. Navadika ho latabatra tsara tarehy ny kodiaran-tsarety tranainy iray izay ahafahana misotro kafe manitra izay efa avy nendasin'ny vehivavy iray avy ao an-tanàna. Lasa zava-tsarobidy tsy takatry ny saina izay tsy fahita firy ny akorandriaka tranainy iray … ny lakana iray efa tranainy navelan'ny ranomasina teo amin'ny torapasika… ny tavim-boninkazo tranainy feno voninkazo tropikaly tsara tarehy …
Na izany aza, nanamarika i Anderson fa nisy fiantraikany goavana teo amin'ny indostrian'ny fizahantanin'ny namany ny krizy ara-toekarena. Noho ny tsy fisian'ny mpanjifa, maro tamin'ireo trano fandraisam-bahiny ireo no voatery nakatona. Kanefa, mbola nosokafana noho ny fikirizana nataon'ireo tompony ny sasany tamin'izany. Miresaka mivantana amin'ireo mpamaky any Honduras izy:
Raha misy Honduras, na dia eo aza ny krizy kanefa mieritreritra ny haka fialan-tsasatra kely amin'ity fahavaratra ity, maniry aho mba hijery ny karazan-toerana izay nolazaiko izy ireo satria, ankoatra ny hatsaran-tarehin'izany, dia toerana izay mino ny harenantsika, mino ny vahoakantsika sy ny kolontsaintsika, ary trano fialokalofana kelin'ny fanantenana izy ireo.
Namintina ny andraikitra azon'ny Honduras atao i Anderson mba ahazoana antoka fa mbola misokatra ny toerana tahaka ireo voalaza etsy ambony ireo ary mbola afaka aseho ny hakanton'ny firenena manontolo:
Tokony ho mpampiroborobo ny firenentsika mavitrika indrindra isika. Tiako ny rehetra mba hanomboka hieritreritra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampielezana ny teny mikasika ilay “hotely kely” izay fantatsika tao amin'ny zorony kely iray tany Honduras ary nandray antsika tsara sy nihinanantsika sakafo Honduras izay tsy mbola nohanintsika hatramin'izay. Ampielezo ny teny momba ity orinasam-pizahantany madinika ity izay misy olona tsara fanahy nitondra antsika hijery ny riandrano mahavariana ary nampianatra antsika momba ireo zavamaniry tompotany sy ny biby anaty ala ary nahitantsika ny fetibe nentim-paharazana izay nanome aingam-panahy antsika mba hankasitraka kokoa ny kolontsaintsika. Andao hitsidika sy hanohana ireo toerana ireo isika. Hanome fihetsika feno fitiavana ho an'ny firenena iray izay tena mila izany tokoa isika ankehitriny.
Fandikanteny notohanan'i Marco Cáceres